Luca Todesco dia mandefa fanararaotana amin'ny tranokala ho an'ny jailbreak ho an'ny iOS 9.3.x | Vaovao IPhone
Luca Todesco dia mandefa exploit web ho an'ny jailbreak ho an'ny iOS 9.3.x tsy misy taratasy fanamarinana
Raha vantany vao hitako izay nitranga nefa tsy niraika loatra dia nieritreritra aho «Eny, eny, amin'ny farany Todesco dia namoaka jailbreak ', saingy tsapako fa tsy izany. Ho an'ny vao manomboka, satria inona nipoaka ilay mpikaroka hacker sy fiarovana malaza dia mpamadika Safari ho an'ny jailbreak, ary hanohy satria io jailbreak io no efa natombok'i Pangu efa ela, fitaovana iray hampiatoana ny fonja iOS 9.3.x.
La fitaovana web natombok'i Todesco dia mampatsiahy tokoa Jailbreak aho, ny fitaovana mamoha iPhone voalohany noforonin'i comex niaraka tamin'ny fanampian'ny chpwn, saurik ary MuscleNerd, ankoatry ny hafa. Ny hany ilaina mba hampandehanana azy dia ny manokatra ny tranonkala amin'ny Safari amin'ny fitaovana iOS, paompy amin'ny "go" ary hidio ny fitaovana. Fa inona marina no atolotray ho antsika io fanombohana iray amin'ireo mpijirika mampiady hevitra indrindra tato ho ato io? Izahay eto ambany dia hanazava izany aminao.
Jailbreak ho an'ny tranonkala iOS 9.3.x dia mamela antsika tsy hiankina amin'ny mari-pankasitrahan'ny developer
Apple manatsara hatrany ny fiarovana iOS, ka ny jailbreak ampahibemaso farany indrindra dia a jailbreak semi-tethered. Midika izany fa tsy maintsy mihazakazaka ilay fitaovana isika isaky ny mamono na mamerina mamerina iPhone, iPod Touch na iPad. Ity fanombohana ny Todesco ity dia hanatsara ny traikefan'ny mpampiasa satria ahafahantsika:
Aza miankina amin'ny fampiharana toy ny teo aloha. Mila manindry ny bokotra "mandeha" fotsiny isika amin'ny pejin-tranonkala izay avelantsika eo amin'ny faran'ny lahatsoratra.
Miasa tsy misy fetran'ny mari-pankasitrahana ho an'ny mpamorona. Azo antoka fa io no teboka lehibe indrindra. Rehefa namoaka ny fitaovany i Pangu, ireo mpampiasa izay namaky ny fitaovany niaraka taminy dia niantehitra tamin'ny mari-pankasitrahana ho an'ny fametrahana ny .ipa an'ny rindranasa. Rehefa tapitra ny taratasy fanamarinana dia mijanona tsy mandeha ny fampiharana, manidy amin'ny fotoana itiavantsika azy io, izay nanery anay hiandry / hampiasa fanamarinana vaovao. Amin'ny alàlan'ity fitaovana ity dia tsy mila manindry ilay voalaza hoe "mandeha" fotsiny isika fa tsy manahy momba ireo mari-pahaizana ireo.
Ampandehano ny jailbreak aorian'ny famonoana na famerenana ny fitaovana. Io dia hitovizan'ny fikasihana ilay application.
Ny zavatra ratsy amin'ity fitaovana ity dia miankina amin'ny jailbreak Pangu, izany hoe tsy ho afaka jailbreak fitaovana 32-bit ianao, tsy hampiova ny jailbreak ary tsy ho afaka hametraka irery an'i Cydia ianao, izay midika fa hatramin'ny jailbreak voalohany dia tsy maintsy ataontsika amin'ny rafitra napetrak'i Pangu eo am-pelatanantsika io rehefa natombony ny fitaovany.
Ka raha iray amin'ireo nijanona tao amin'ny iOS 9.3.x ianao hitandrina ny jailbreak dia mendrika ny hamonjy tranonkala jbme.qwertyoruiop.com ao amin'ny tianao indrindra satria hamonjy aretin'andoha be dia be ianao, manomboka amin'ny fanesorana ny rindranasa jailbreak Pangu avy amin'ny efijery an-tanànan'ny iPhone, iPod Touch na iPad anao aorian'ny fampiasana azy voalohany. Ahoana ny hevitrao momba ity famotsorana an'i Todesco ity? Misy zavatra, sa tsy izany?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Luca Todesco dia mandefa exploit web ho an'ny jailbreak ho an'ny iOS 9.3.x tsy misy taratasy fanamarinana
… Ary amin'izao fotoana izao, iza no manana ios 9?, Hamoaka azy io, amin'ny ora tsara.
Valiny tamin'i Jimmyimac
Raha tena hendry ianao dia maninona no tsy vitan'ny jailbreak?
fiarovan-doha dia hoy izy:
Valiny amin'i Kaski
Manana ios9 amin'ny ipad aho… ary amin'ny iPhone 6S miaraka amn'ny jailbreak… ahoana no hataoko amin'ny fampandehanana an'io fonja io amin'ny iPhone sy hamafana ny fampiharana izay nananako hatramin'izao?
Raha ny fahazoako azy ... mankany amin'ilay pejy aho .. manome GO .. ary afaka mamafa ny fampiharana PP% &% ve aho? Voatahiry ve ny zava-drehetra napetrako tamin'ny cydia?
Tsy afaka manao azy aho dia manindry mandeha ary manavao ny pejy, avy eo averiko miverina, hita ny afisy fa akatako izy ary manavao ilay pejy indray. Fanampiana 6s Plus 9.3.3!
salama manana iOS 10.3.2 aho rehefa mametraka yalu dia tsy mametraka ireo fonosana amin'ny cydia izay pejy tokony hapetrakao amin'ny cydia hampidina azy ireo?
Gmail for iOS dia nohavaozina miaraka amina vaovao mahaliana sasany
Fanatsarana ny Lightroom ho an'ny iPhone, Lightroom CC ary Adobe Camera RAW